tevera nhanho idzi kuti uwane google kumba mini & 2 mwedzi ye spotify premium ye $ 1 chete
Kuru Nhau & Ongororo Tevedza nhanho idzi kuti uwane Google Home Mini & maviri mwedzi yeSpotify Premium ye $ 1 chete
Tevedza nhanho idzi kuti uwane Google Home Mini & maviri mwedzi yeSpotify Premium ye $ 1 chete
Pakutanga kwaNovember, takashuma pa a zvikuru kubva kuSpotify neGoogle. Vane account yemhuri yeSpotify Premium vakakwanisa kunyorera mahara Google Home Mini, asi zvinosuwisa kuti zvikamu zviripo zvakagoverwa nekukurumidza.
Kana iwe & apos; wakarasikirwa nepromo, usanetseke! Chibvumirano chiripo zvakare, uye isu & maapos tiri pano nemirayiridzo yekuti ungabata sei mutauri akangwara + 2 mwedzi yese yeSpotify Premium ye $ 1 chete. Kana iwe uchifarira, ita shuwa kutevedzera pazasi matanho.
Saina kuti 3-mwedzi kuyedzwa kweSpotify Premium nekudzvanya pano . Izvi zvinokubhadhara iwe $ 1. Kana iwe & apos; watove munhu akanyorera, ndokumbira utarise kuti iwe & apos; uchafanirwa kugadzira account nyowani.
Zvino, iwe & apos; tichafanira kusimudzira kune chirongwa cheMhuri ( tinya pano ). Izvi zvinoderedza kuyedzwa kwako kusvika kumwedzi miviri, asi zvinokutendera iwe kukodzera iyo Google Imba Mini. Saiti iyi inoti iwe & apos; uchabhadhariswa madhora gumi nemashanu pamwedzi muhurongwa hweMhuri, asi ichanyatso kuendesa iyo $ 30 promo kiredhiti kubva mukutongwa kuaccount yako usati wakubhadharisa.
Yekupedzisira nhanho, chero tevera iyi link kana tarisa yako inbox kuti utumire tsamba kubva kuSpotify inokuendesa kune Google Home kupihwa. Paunenge uchinge uri mukati peji, ingotinya 'Tora izvozvi' kuti utenge kutenga kwako.
Iko kushomeka kunofanirwa kushandiswa otomatiki pakubuda. Kutumira kunofanirawo kuva pachena. Chipo chinopera musi wa12 / 31/18, uye zvishandiso zvinofanirwa kuregererwa na 1/15/19. Nakidzwa!
360 vhidhiyo isiri kushanda Android
chii chiri \_ t muJava
chinyorwa chakanakisa 8 wallet kesi
Nyowani Instagram ficha inoshandura Nyaya yako kuita yekuimba-pamwe chete
Galaxy S8 vs Galaxy S8 + vs S7, S7 kumucheto, LG G6, iPhone 7 Plus, Pixel XL: saizi kuenzanisa
OnePlus 9 zuva rekuburitsa, mutengo, maficha uye nhau
Apple iPhone 7 Plus vs iPhone 6s Plus vs iPhone 6 Plus: specs kuenzanisa
Mashandisiro aungaita iyo Galaxy S20 uye Cherekedza 20 Inokasira Kugovana nekukurumidza faira yekumhanyisa kumhanyisa
Moto G5S Plus vs Moto G5 Plus: misiyano yese uye maficha achienzaniswa
Yakanakisa inotakurika isina waya maBluetooth masipika (2021)
Iyo iPhone 12 ndiyo yakanakisa foni ye5G kutenga iyo yeVerizon uye AT & T network zvirongwa ikozvino
Apple Beta Software Chirongwa nhengo dzinogona ikozvino kuisa iOS 10.3.2 Beta 2 pane yavo iPhone kana iPad